Akụkọ ụlọ ọrụ - Nongchuanggang E-commerce Industrial Park (Weifang) Co. Ltd.
"China ga-aga n'ihu na-akwado ụlọ ọrụ sitere na mba niile na-enyocha ohere azụmaahịa na China site na nyiwe mmeghe dịka Expo," Onye isi ala Xi Jinping kwuru. China ga - enweta ikike nke azụmaahịa mba ụwa ma nye onyinye dị mma na uto nke azụmaahịa mba ụwa na mmepe akụ na ụba ụwa. China ga eme ngwangwa mmepe nke udiri azuma ahia ohuru, dika ahia e-commerce, ime ka ndi nlekota ohuru azuma ahia di iche.
Anqiu City nke Shandong Province kpebisiri ike na-eme mkpebi na nhazi nke Party Central Committee na Council Council, na-emezi ma na-edozi atumatu ahia na mba ụwa, na-aga n'ihu "njikarịcha ise" na "iwu atọ", na-azụlite ụdị na ụdị nke ndị mba ọzọ ahia, ma na-akwalite mmepe di elu nke ahia ahia ahia. N'ihe na-akpata mbelata nke azụmaahịa zuru ụwa ọnụ, azụmaahịa mba ofesi China emeela ka usoro a sie ike ma rute n'ọkwa dị elu n'ihe gbasara uto. Anyị enwetala ọganihu ọhụụ n'ịhụ na nkwụsi ike na ịkwalite ogo nke azụmaahịa mba ofesi China.
N'okpuru usoro iwu a, Anqiu Agricultural Development Group, ụlọ ọrụ nwere obodo, na China Rural Innovation Port Co., Ltd. jikọrọ aka na Nongchuanggang Cross Border E-commerce (Weifang) Co. Ltd, nke a maara dị ka NCG. Dị ka ọrụ bụ isi nke Anqiu City n'afọ a, NCG abụghị naanị ọrụ dị mkpa iji kwado ngwaahịa ndị a na-akọ ugbo na mpaghara, kamakwa ọ na-akwalite mmepe akụ na ụba na mmepe mmepe nke Anqiu City. Dị ka nnukwu ahịa maka ngwaahịa ugbo, Anqiu abụghị naanị ọgaranya yabasị na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, ginger, kamakwa ọtụtụ akwụkwọ nri. A na-ewu usoro ikpo okwu e-commerce nke oke osimiri nke Innovation Port Agricultural maka mbupụ usoro nke yabasị akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, ginger na akwụkwọ nri, nke bụ ngwaahịa nke Anqiu City.
Kemgbe mmalite ya site na mbido Jenụwarị 2021, n'etiti ụlọ ọrụ mbupụ ọrụ ugbo na 148 na Anqiu, ugbu a, 20 n'ime ha sonyeere ikpo okwu. Mpempe akwụkwọ China maka ikpo okwu adịla n'ịntanetị na Jenụwarị 7Nke, na nke Bekee a na-edeghị na Bekee n’abalị iri na asaa n’ọnwa JenụwarịNke. N'etiti Jenụwarị 17 na Jenụwarị 26 enwere karịa nleta 40000, nweta azụmahịa 4 na mkpokọta, ekenyela site na South Korea, United Kingdom, na New Zealand, yana ngụkọta nke $ 678628. Iwu sitere na France, Australia, na Russia nọ na mkparịta ụka.